Ithegi: iframe breaker
Yongeza i-Iframe Breaker kwindawo yakho
NgoLwesithathu, Oktobha 10, 2012 NgoLwesibini, Oktobha 9, 2012 Douglas Karr
Umhlobo wam olungileyo uKevin Mullett wandazisa xa ecofa kwelinye lamakhonkco kwi-Twitter, waziswa kwindawo yam kunye ne-popup enkulu kunye nesilumkiso sekhowudi enobungozi. Kwanele ukoyikisa ukukhutshwa ngumntu, ndiye ndaqala ke ukuvavanya. Iyaphela ukuba kwakungekho nto iphosakeleyo kwindawo yam-ingxaki yayilikhonkco. Ikhonkco kwenye indawo livelise ibar yesixhobo phezulu
Ngakumbi nangakumbi, ndizifumana ndibuza abathengisi kunye neenkampani imibuzo efanayo ngaphezulu nangaphezulu. Ukuba ucinga ngokuphuhlisa esakho isicelo, ezi ziimpawu ezi-3 ezifuna ukudityaniswa ukusukela kusuku lokuqala kwisicelo sakho ukuba unqwenela ukugcina izixhobo kamva. Ngaba isicelo sakho… sine-API? Akudingeki ukuba ikhetheke okanye inkonzo yewebhu… nayiphi na into yeXML ecacileyo eya kuyenza. Siza kufuna ukuyidibanisa